ငါတို့တွေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာ (ရေး – နိုင်မြန်မာ ၊ ဆို – ကာတွန်းဝင်းအောင်) | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် စစ်စစ်တို့ရဲ့ “လူမျိုး ဘာသာ မခွဲခြား ငါတို့ နှလုံးသား” စိတ်ဓာတ်ကို ဂီတစာဆို နိုင်မြန်မာက ဖော်ကျူး ရေးဖွဲ့ထားပြီး မိုးမခ မိတ်ဆွေ ပင်တိုင်ကလောင်ရှင် ဆရာ ကာတွန်းဝင်းအောင်က သီဆိုထားတဲ့ သီချင်း ရုပ်သံ ဗီဒီယို ဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာအတွက် “အမုန်းတွေမလိုပါ၊ အပြုံးတွေ ချိုသာ” ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဖော်ဆောင်ကာ နိုင်ငံသား လူမျိုး ဘာသာစုံ နိုင်ငံသားအားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားပါတယ်။
အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ ဆရာ နိုင်မြန်မာ၊ ဆရာ ကာတွန်းဝင်းအောင် တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သီချင်းရုပ်သံကို စီးပွားဖြစ် ပြန်လည် အသုံးမချရန်
အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံ သတိပေးပါတယ်။
Nyein Chan Aye YouTube Music Channel. Non Commercial Use ONLY!
နိုင်မြန်မာ ● ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေး (0)
နိုင်မြန်မာ – ပစ္စုတ်ဒေ၀ (0)
နိုင်မြန်မာ – “နန်းကျတရားခံများ” (0)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:MoeMaKa VDO, ကာတွန်း ၀င်းအောင်